VLC for Android 3.3.0 Beta4အန္းဒ႐ိုက္ APK ကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ | Aptoide
အသားေပးေဖာ္ျပထားေသာ ဂိမ္းမ်ား၏ အစုမ်ား
အသားေပးေဖာ္ျပထားေသာ အက္ပ္မ်ား၏ အစုမ်ား
အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူမ်ားအတြက္ အေၾကာင္းအရာကို ျပပါ
9.5M 30.5 MB 4.43
VLC for Android ၏ ရွင္းလင္းခ်က္
VLC Media Player ကိုအများဆုံးမာလ်တီမီဒီယာဖိုင်တွေအဖြစ် discs တွေကို, devices များနှင့်ကွန်ရက်က streaming များ protocols များကစားမယ့်အခမဲ့ open source Cross-platform မာလ်တီမီဒီယာကစားသမားဖြစ်ပါတယ်။
ဤသည်ကို Android ™ပလက်ဖောင်းမှ VLC media player ရဲ့ port ဖြစ်သည်။ Android အတွက် VLC VLC ၏ desktop ကိုဗားရှင်းကဲ့သို့မည်သည့်ဗွီဒီယိုနဲ့အသံဖိုင်တွေအဖြစ်ကွန်ယက်ကိုစီး, ကွန်ယက်ရှယ်ယာနှင့် drives တွေကိုနှင့် DVD ကို ISOs ကစားနိုင်ပါတယ်။
Android အတွက် VLC အားလုံးလိုက်တယ်အသံဖိုင်ကို formats ကစားခြင်း, တစ်ဦးပြည့်စုံဒေတာဘေ့စနဲ့အပြည့်အဝအသံဖိုင်ကစားသမားတစ်ဦးတန်းတူရေးနှင့် filter များဖြစ်ပါတယ်။
VLC ကလူတိုင်းအတွက်ရည်ရွယ်သည်လုံးဝအခမဲ့ဖြစ်ပါသည်, ကြော်ငြာမပါ, မပါ in-app-ဝယ်ယူမှုမရှိထောက်လှမ်းရေးရှိပြီးအသည်းအသန်စေတနာ့ဝန်ထမ်းများကတီထွင်ခြင်းဖြစ်သည်။ လူအားလုံးတို့သည် source code ကိုအခမဲ့ရရှိနိုင်ပါသည်။
အန်းဒရွိုက်™များအတွက် VLC VLC ၏ desktop ကိုဗားရှင်းကဲ့သို့အများဆုံးဒေသခံဗွီဒီယိုနဲ့အသံဖိုင်တွေအဖြစ် (သပ္ပါယ် streaming များအပါအဝင်) ကွန်ယက်ကိုစီး, DVD ကို ISOs ပါဝင်သည်။ ဒါဟာအစ disk ကိုရှယ်ယာထောက်ခံပါတယ်။
အားလုံးကို formats MKV, MP4, AVI, MOV, Ogg, FLAC အ, TS, M2TS, Wv နှင့် AAC အပါအဝင်ထောက်ခံနေကြသည်။ အားလုံးကုဒ်ပြောင်းကိရိယာများမျှသီးခြား downloads, အတူထည့်သွင်းထားပါသည်။ ဒါဟာစာတန်းထိုး, Teletext နှင့်သရုပ်ဖော်စာတန်းများကိုထောက်ခံပါတယ်။
Android အတွက် VLC အသံနှင့်ဗီဒီယိုဖိုင်များကိုမီဒီယာစာကြည့်တိုက်ရှိပြီးတိုက်ရိုက်ဖိုလ်ဒါ browse ဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။
VLC က Multi-လမ်းကြောင်းအသံနှင့်စာတန်းထိုးများအတွက်ထောက်ခံမှုရှိပါတယ်။ ဒါဟာအသံအတိုးအကျယ်, အရောင်အဝါများနှင့်ရှာထိန်းချုပ်ဖို့ Auto-လည်ပတ်, အသှငျအပွငျ-အချိုးအစားချိန်ညှိခြင်းနှင့်အမူအရာထောက်ခံပါတယ်။
ဒါဟာအစ, အသံထိန်းချုပ်ဘို့ဝစ်ဂျက်များပါဝင်သည်အသံနားကြပ်ထိန်းချုပ်မှုကိုအထောက်အပံ့, အနုပညာနှင့်ပြည့်စုံသောအသံမီဒီယာစာကြည့်တိုက်ကိုဖုံးလွှမ်း။
Android အတွက် VLC သူတို့အားအမျိုးအစားမှရယူသုံးရန်လိုအပ်သည်:
သင့်ရဲ့အားလုံးမီဒီယာဖိုင်များကိုဖတ်ရှု• "ဓါတ်ပုံများ မီဒီယာ ဖိုင်များ" :)
• "သိုလှောင်" SD ကဒ်များပေါ်တွင်သင်၏အားလုံးမီဒီယာဖိုင်များကိုဖတ်ရှုဖို့ :)
•က "Other", ကွန်ယက်ဆက်သွယ်မှုစစ်ဆေး volume ကိုပြောင်းလဲစေခြင်း, ဖုန်းမြည်သံ ထား. , အန်းဒရွိုက် TV ပေါ်မှာ run နှင့်ပေါ့ပ်အပ်အမြင်ဖော်ပြရန်, အသေးစိတ်ကိုအောက်တွင်ကြည့်ပါရန်။
•ဒါဟာပေါ်တွင်သင်၏မီဒီယာဖိုင်များကိုဖတ်ရှုဖို့အမိန့်အတွက်, "သင်၏ USB storage ကိုရဲ့ contents ကိုဖတ်ပြီး" လိုအပ်နေပါသည်။
•ဖိုင်တွေနဲ့စတိုးဆိုင်စာတန်းထိုး၏ဖျက်မှုကိုခွင့်ပြုနိုင်ရန်အတွက်ဒါဟာ "သင်၏ USB storage ကိုရဲ့ contents modify သို့မဟုတ် delete" လိုအပ်နေပါသည်။
•ဒါဟာကွန်ယက်နှင့်အင်တာနက်စီးဖွင့်လှစ်ရန်, "အပြည့်အဝကွန်ယက်ကို access ကို" လိုအပ်နေပါသည်။
•ဒါကြောင့်ဗီဒီယိုတစ်ကားကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအိပျပျြောရာမှ ... သင့်ရဲ့ဖုန်းကိုတားဆီးနိုင်ရန်အတွက် "အိပ်ပျော်နေသောကနေဖုန်းကိုတားဆီး" လိုအပ်နေပါသည်။
•ဒါကြောင့်အသံအသံအတိုးအကျယ်ကိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့အတွက် "သင်တို့၏အသံ setting များကိုပြောင်းလဲပစ်" လိုအပ်နေပါသည်။
•သင်သည်သင်၏အသံဖုန်းမြည်သံကိုပြောင်းလဲခွင့်ပြုနိုင်ရန်အတွက်ဒါဟာ "system setting များကိုပြုပြင်မွမ်းမံ" လိုအပ်နေပါသည်။
•ဒါကြောင့် device ကိုချိတ်ဆက်သို့မဟုတ်မပါခြင်းရှိမရှိစောင့်ကြည့်နိုင်ရန်အတွက် "အမြင်ကွန်ယက်ကိုဆက်သွယ်မှု" လိုအပ်နေပါသည်။
•ဒါဟာထုံးစံရုပ်ပုံ-In-ရုပ်ပုံဝစ်ဂျက်ကိုစတင်ရန် "အခြားအက်ပ်ကျော်ဆွဲ" လိုအပ်နေပါသည်။
•ဒါဟာထိန်းချုပ်မှုအပေါ်တုံ့ပြန်ချက်ပေးဖို့ "ထိန်းချုပ်မှုတုန်ခါမှု" လိုအပ်နေပါသည်။
•ကိုယ်ကသာက Android ကို TV ကိရိယာများပေါ်တွင်အသုံးပြုအန်းဒရွိုက်တီဗီ launcher screen ပေါ်မှာအကြံပြုချက်များသတ်မှတ်ထားဖို့ "startup မှာ run ကို" လိုအပ်နေပါသည်။
•ကိုယ်ကသာက Android ကို TV ကိရိယာများပေါ်တွင်မေးမွနျး Android တီဗွီ devices များပေါ်တွင်အသံရှာဖွေမှုများကို "မိုက်ခရိုဖုန်း" လိုအပ်နေပါသည်။
ဤျပန္လည္သံုးသပ္ခ်က္မ်ားနွင့္ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားမွာ Aptoide အက္ပ္ကို အသံုးျပဳသူမ်ားထံမွ လာျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သင္ကေပးလိုပါက Aptoide ကို ထည့္သြင္းေပးပါ
ဤအက္ပ္သည္ ဗိုင္းရပ္စ္၊ ေမးလ္၀ဲႏွင့္ အျခားမသမာေသာ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားအတြက္ လံုၿခံဳေရးစစ္ေဆးခ်က္ကို ေအာင္ျမင္ခဲ့ၿပီး မည္သည့္အႏၲရာယ္မွ် မရွိပါ။
VLC for Android ကဲ့သို႔ေသာ အက္ပ္မ်ား
APK သတင္းအခ်က္အလက္ - VLC for Android
3.3.0 Beta 4
Aptoide အက္ပ္Aptoide တီဗြီAppCoinsကၽြႏ္ုပ္တို႔အေၾကာင္းအလုပ္အကိုင္မ်ားကူညီပံ့ပိုးမႈ
မူရင္းကုဒ္APIAptoide IAB (Catappult)
ဥပေဒဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္©2020 APTOIDE.COM. မူပိုင္ခြင့္မ်ားအားလံုး ရရွိၿပီး